စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနကို စစ်တပ်အရာရှိတွေ ပြောင်းရွေ့ခန့်ထားလိုက်တဲ့အပေါ် ကန့်ကွက်တဲ့အနေနဲ့ ဘူမိဗေဒပညာရှင်များက စက်တင်ဘာလ ၁၄ ရက်နေ့က ဖဲကြိုးနီလှုပ်ရှားမှု စတင်စဉ်
Photo: Tin Maung Win Facebook
စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနကို ဒုတိယသမ္မတ ဦးဥာဏ်ထွန်းရဲ့ ကိုယ်ရေးအရာရှိ DSA အပတ်စဉ် ၃၈ ဆင်း ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီး တစ်ဦး ပြောင်းရွေ့ခန့်ထားလိုက်တဲ့အတွက် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန မြန်မာ့ရေနံ ဘူမိဗေဒနဲ့ အင်ဂျင်နီယာအရာရှိများက ဖဲကြိုးနီလှုပ်ရှားမူကို မနေ့က စတင်လိုက်ပါတယ်။
အခုလိုဆန့်ကျင်ရခြင်းဟာ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ ဆောင်ရွက်ခြင်းမဟုတ်ဘူးလို့ မြန်မာရေနံက ဘူမိဗေဒ အရာရှိတစ်ဦးဖြစ်သူ ဦးအောင်မြင့်က ပြောပါတယ်။
မြန်မာ့ရေနံလုပ်ငန်းကို အင်္ဂလိပ်အစိုးရက BOC ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ လုပ်ကိုင်ခဲ့ချိန်ကစပြီး မြန်မာအစိုးရပိုင် MOC MOGE စသဖြင့် ပြောင်းလဲခဲ့ချိန်အထိ ဌာနအတွင်း ကျွမ်းကျင်ပညာရှင် ဘူမိဗေဒနဲ့ အင်ဂျင်နီယာများက ဦးဆောင်ပြီး လုပ်ကိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိအနေနဲ့ စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနမှာ န၀တ၊ နအဖ လက်ထက် ဗိုလ်ချုပ်လွန်းသီ ၀န်ကြီးဖြစ်ချိန်မှာ ၀န်ကြီးဌာန အတွင်း တပ်မတော်အရာရှိများ အလုံးအရင်းနဲ့ ပြောင်းလာခဲ့တာလို့ ဆိုပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ရေနံဓါတုမှာ စက်ရုံမှူးများ၊ ရေနံရောင်းဝယ်ရေးမှာ ညွန်ကြားရေးမှူး အဆင့်ဆင့်ရာထူးများ စတာတွေမှာဖြစ်ပါတယ်။ အလား တူ မြန်မာ့ရေနံမြေများမှာ အထွေထွေ မန်နေဂျာ ၁၁ဦးရှိတဲ့ အနက် ၅ဦးကို စစ်တပ်က ရာရှိများက နေရာယူထား တာဖြစ်ပါတယ်။
စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနက ပြုလုပ်တဲ့ ဖဲကြိုးနီ လှုပ်ရှားမူနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်ကို နားဆင်နိုင်ပါတယ်။
နေရာတိုင်းမှာ ဒီလို ပဲ ဖြစ်နေတာတောင် သောက်ရှက် မရှိ ဆက်လုပ်နေတယ်။
Sep 16, 2015 08:06 PM
ဖြူ နီ ပြာ ရောင်စုံ
နေရပ်- ဖူးပွင့်လို့ ဝေဆာ
Sep 16, 2015 10:39 AM
Sep 16, 2015 08:35 AM
Government trying to control all government department by military knowing that present government cannot rule the country anymore. Cruel plan to destroy the country.
Sep 16, 2015 07:47 AM
အရည်အချင်းပြည့်စုံသောခေါင်း ဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်သော NLD ကို မဲပေးပြီး ပြည်သူ့ဆန္ဒနဲ့အညီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲ (CHANGE) ကြပါစို့။ ပန်းပုမထု တတ်တဲ့ ဆရာဝန်ကပန်းပုထုတော့ ပန်းပုရုပ်လှလှပပ ဖြစ်မလာထင်း ဘဲဖြစ်သလိုပန်းပုဆရာကဆရာဝန်အ လုပ်ကိုဝင်လုပ်ဆေးကုခွဲစိတ် တော့ပြည်သူ လူထုကျန်းမာရေး ကိုဖျက်ဆီးလူတွေသေကျေ အောင်လုပ်သလိုဖြစ်သွားမည်။ ပညာရှင်တွေ ကစစ်ဝင်တိုက်တော့ စစ်တိုက်မကျွမ်း ကျင်လို့ စစ်ရှုံးသလို စစ်ဗိုလ် တွေက ပညာရှင်တွေ အလုပ်ကို ဝင်လုပ် အမိန့်အာဏာ သုံးပြီးစီမံ ခန့်ခွဲတော့ နိုင်ငံနှင့် ပြည်သူလူထုကို အရှေ့တောင်အာရှ မှာနှစ်ပေါင်း ၅၀ အတွင်း အဆင်းရဲ ဆုံးဖြစ်အောင်တွန်းပို့သလို ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အဖြေကတော့ ဒီမိုကရေစီ လူ့အခွင့်အရေး တရား ဥပဒေစိုးမိုးရေး ငြိမ်းချမ်းရေး ရအောင်လုပ်ပြီးနိုင်ငံတကာမှာအဆင့်မှီဝင်ဆန့်အောင်လုပ် နိုင်ငံတကာငြိမ်း ချမ်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေမှာမြန်မာစစ်ဗိုလ်စစ်သားတွေ နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီ လစာရအောင်လုပ်ပေးနိုင်ရင် အရပ်ဘက် ရာထူးတွေကိုလုစရာ အကြံအဖန်ကိစ္စတွေ လုပ်စရာမ လိုတော့ဘူးပေါ့။ ဒီကိစ္စတွေအကောင်အထည်ဖေါ်နိုင်သူ နိုင်ငံတကာနှင့်ရင်ဘောင်တန်း အဆင့်မှီသော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်စွမ်းဆောင်နိုင်မည်ဟုယုံကြည်ပါသည်။
Sep 16, 2015 06:13 AM